ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: August 2012
- ဟီဘရူးအက္ခရာ Vau
- ရာသီက မိဿ
ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းချုပ် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ရိုးရိုး ဘုန်းကြီး နှစ်ပါးကို ပြောဆို ဆုံးမနေဟန်၊ ဂိုဏ်းချုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး။ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အ၀ါရောင်တွေ လွှမ်းနေတဲ့ အပေါ်ဝတ်ရုံ၊ ခေါင်းဆောင်းနဲ့ အတွင်းခံအောက်ပိုင်းမှာ ပြာလွင်နေတဲ့ ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားပါတယ်။ သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်နေတဲ့ Cardinal (ခရစ်ဘုန်းကြီး) နှစ်ပါးရဲ့ ခေါင်းပေါ်က ခေါင်းဆောင်းနှစ်ခုက ဒီကားချပ်ရဲ့ မြှုပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တော်တော်များများမှာ ဒီအကြောင်းကို ဖော်ပြရေးထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ တားရော့ထုပ်တွေရဲ့ Major ကားချပ် (၂၂)ချပ်မှာ Lem niseate (အ၀ိုင်း နှစ်ခု၊ နေလနှစ်ပါးရဲ့ သင်္ကေတ) ပုံပါတဲ့ ကားချပ်များအဖြစ် နံပါတ် I.Magician နဲ့ နံပါတ် XI.Strength ကားချပ်နှစ်ချပ်ကိုသာ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အခုနံပါတ် V ကားချပ်၊ ဘုန်းကြီးကတ်မှာ နေလ သင်္ကေတပါတယ်ဆိုတာရယ်၊ သူ့အဓိပ္ပာယ်တွေက ဘာကို ရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာကို Fred Gettings ရဲ့ The Book of Tarot ထဲမှာပဲ တွေ့ရပါတယ်။
ထ = ၀ ၀ = နေ + လ = ဖို + မ = အပူ + အအေး အစရှိတဲ့ Lemniscate ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို နံပါတ် I.Magician ကားချပ်မှာ ဖွင့်ဆိုရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။ ဒီကားချပ်မှာ တစ်ခုထူးခြားတာက နေလ သင်္ကေတ နှစ်ခုဟာ ပူးကပ်မနေပဲ အတန်ငယ် ဝေးကွာနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ခေါင်းဆောင်းအ၀ိုင်းက အနီရောင်ရင့်တဲ့အတွက် နေသဘော၊ positive, active သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လက်တစ်ဘက်က အောက်ဘက်မြေကြီးဆီကို ညွှန်ပြနေပါတယ်။
ညာဘက် Cardinal ရဲ့ခေါင်းဆောင်းအ၀ိုင်းက အ၀ါရောင်နုတယ်။ ဒါကြောင့် Lunar=လ ရဲ့သဘော Negitive, Passive သဘော၊ “မ” သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘယ်လက်တစ်ဖက်က အပေါ်ကို ညွှန်နေပါတယ်။ Magician ကားချပ်ပါ ရုပ်ပုံရဲ့ လက်ဟန်အနေအထားအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Leminiscate ရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ နီးကပ်ပူးပေါင်းမှု မရှိသေးဘဲ၊ အတန်ငယ်ဝေးကွာနေခြင်းရဲ့ သဘောသဘာဝတွေအရ (ဒီနေရာမှာ နေ+လ၊ အပူ+အအေး၊ ဖို+မ စတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် သဘောတရားတွေမယူပဲ) “လောကီနဲ့ လောကုတ်ကို မျှတစွာ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်း” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ယူရပါမယ်။ လောကီနယ်သား တစ်ဦးအနေနဲ့ ရပ်တည်နေသော်လည်း လောကုတ္တရာရဲ့ သဘောသဘာဝတွေကို ကျင့်သုံးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူ၊ လေ့လာဆဲ၊ လေ့ကျင့်ဆဲသူလို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်မယ်၊ မိရိုးဖလာ ဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ ပတ်သက်မယ်၊ ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘာသာရေးစာပေ၊ အတွေးအခေါ်၊ အကျင့်သီလ၊ အဆောက်အဦး၊ ဘုရား၊ ပုထိုး စတာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပါမယ်။
နောက်အဓိပ္ပာယ် တစ်ခုက ဘုန်းကြီးဆိုတာ ကိုယ်တိုင် စီးပွားမရှာဘူး။ လူတွေ၊ ဒကာ ဒကာမတွေ လှူဒါန်းသ၍ကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲတယ်။ အပိုအလျှံ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းခွင့် မရှိဘူး။ တနေ့စာ သုံးစွဲပြီး ပိုသမျှ မျှဝေပေးကမ်း စွန့်ကြဲရတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ လုံခြုံပြည့်စုံပြီး ပိုသမျှ ပြန်လည်လှူဒါန်း ပေးကမ်း၊ စွန့်ကြဲရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာသာရေးကျင့်၊ လူတွေကိုလည်း ပြုပြင်ဆုံးမ လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြပေးရတယ်။ အမှားအမှန် ဝေဖန်ခွဲခြားခြင်း၊ အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊ သဘောထားကြီးခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း တို့ကိုလည်း ရည်ညွှန်းပါတယ်။
ကားချပ်တွေရဲ့ ညွှန်းချက်တွေက အတော်စုံသွားပြီ။ လက်တွေ့ဟောကွက် နမူနာလေးတွေ ကြည့်ရအောင် . . .။
Major ၂၂ ကတ် အဟောကျင့်ခါစ ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်။
“ဗေဒင်ဆရာကြီး၊ ငါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်။ အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်မဖြစ် မင်းရဲ့ တားရော့နဲ့ ဟောပေးစမ်းပါ”
ထုံးစံအတိုင်း ပြုဖွယ်ရာတွေ ပြုပြီး ကားချပ်တစ်ချပ် ဆွဲလိုက်တယ်။ သူ့မျက်နှာက တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ တလေးတစားပုံပေါ်နေလို့ ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်ထဲက လေးလေးနက်နက် အဓိဌာန်ပြီး သူ့ရင်ထဲက ဆန္ဒဘာလဲ ? . . ဖြစ်မလား/မဖြစ်ဘူးလား? . . ဆိုတာကို ရည်စူးမေးလိုက်တယ်။ ကားချပ်ကို မလှန်သေးပဲ မျက်နှာအနား ဆွဲယူပြီး မျက်စေ့မှိတ် နမ်းရှုံ့ပြီးမှ မျက်စိကို အသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ရင်ထဲမှာတော့ ပေါ်လာတဲ့ကဒ်ကို ငါအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်နိုင်ပါ့မလား . . မှန်ပါ့မလား . . အဓိပ္ပာယ် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ကားချပ်ဖြစ်ပါစေပေါ့ . .
“သူငယ်ချင်း . . စီးပွားရေးကလည်း မကောင်း၊ မိန်းမနဲ့လည်း အဆင်မပြေတာနဲ့ လူ့လောကကြီးကို စိတ်ကုန်ပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်တော့မလို့လား . . စဉ်းစဉ်း စားစားလဲ လုပ်ပါကွာ . .”
ပြောပြောဆိုဆို ကားချပ်ကို စားပွဲပေါ်ချခင်းလိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးကတ် Hierophant ပါဘဲ။
“အမြဲတမ်း ၀တ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ငါတို့ ရွာမှာ သင်္ကြန်တွင်းတိုင်း တရားစခန်းဖွင့်တာ (၃)ကြိမ်ရှိပြီ။ ငါတစ်ခါမှ အလွတ်သေးဘူး။ ပထမတစ်ကြိမ်ဘဲ ယောဂီဝတ်နဲ့ နောက်အကြိမ်တွေမှာ ရဟန်းဝတ်နဲ့ တရားစခန်းဝင်ခဲ့တာ။ အခုနှစ်လည်း ရဟန်းတကာက ကြိုပြောထားပြီးသား။ ငါရဟန်းဝတ်သမျှ ရဟန်းတကာခံပါ့မယ်လို့ . . ဒါပေမယ့် အဲဒီတူမလေးနဲ့ မတွေ့ရသေးတော့ ရဟန်းဝတ်ဖြစ်ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူလို့ . . ”
“စိတ်မပူပါနဲ့၊ ရဟန်းဝတ်ဖို့ သေချာပါတယ်။ ရဟန်းဝတ်နဲ့ တရားစခန်း ၀င်ရမှာပါ။ ငါနောက်သလို ပြောမိတာ ခွင့်လွှတ်ပါကွာ။ သာဓုလည်း ခေါ်ပါတယ်။ ငါလည်း တတ်နိုင်သမျှ တကာခံပါ့မယ်။”
“အေး . . မင်းလည်း ဗေဒင်ယောင်ယောင်၊ ပုတီးယောင်ယောင် လုပ်မနေနဲ့။ သက်တမ်း တစ်ဝက်ကျိုးနေပြီ။ ကိုယ့်အတွက်ပါအောင် လုပ်ဦး . .”
“ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ . . ဆရာကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံပြီးမှာ ကိုယ်တွေ့တရား ဟောပြပါဦး။ တရားနာဖို့ စောင့်နေပါ့မယ်။ အခုလိုကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲ မကောင်းတာ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ငါရန်ကုန်ရောက်တုန်းက ၀င်းသူဇာဆိုင်က ၀ယ်လာတဲ့ RUM တစ်လုံးပါလာတယ်။ မင်းကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာ။ အခုလိုဆိုတော့ ပေးလို့ ဖြစ်ပါတော့မလား။ ငါ ငရဲကြီးနေပါဦးမယ်။”
သူက တစ်နေကုန် ခြံထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ။ မိုးရွာရွာ နေပူပူ။ အသက်ကလည်း ၆၀နားကပ်နေပြီဆိုတော့ ညနေထမင်းစားခါနီးမှာ သွေးပူ စားကောင်း အိပ်ပျော် ဆေးဝါးအနေနဲ့ ယမကာလေး နည်းနည်းတော့ ရံဖန်ရံခါ မှီဝဲတတ်တယ်။ ဒါကိုသိထားလို့ သူကြိုက်တတ်တဲ့ စက်မှု(၁)ထုတ် RUM တစ်ပုလင်း လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာ။
“ဟကောင်ရ . . သင်္ကြန်ကျဖို့က နှစ်လလောက်တောင် လိုသေးတာ။ အခုတော့ ဖြစ်ပါသေးတယ်ကွ။ အတော်ပဲ ငါလည်း အခုတစ်လော ပျင်းနေတော့ သိပ်ထမင်းစားမကောင်း၊ ညအိပ်မပျော်ဖြစ်နေတာ။ ညနေအိမ်ပြန်ရင် မင်းပါလိုက်ခဲ့ကွာ ခြံထဲမှာ သီးနှံလည်း စုံတယ်။ ငါစိုက်ထားတာ။ ခြံထွက်ဟင်းနဲ့ မင်းကို ငါကိုယ်တိုင် ချက်ကျွေးမယ်။”
“သက်တမ်း တစ်ဝက်ကျိုးနေပြီနော်။ အသောက်အစားလည်း ဆင်ခြင်ဦး ။”
“အေးပါ . . အေးပါ . .။ မင်းက ငါ့ကို ပြန်လက်စားချေတာပေါ့ . . ရပါတယ် . . ရပါတယ် . .”
ဘောင်းဘီက ကွာတားပစ်။ စတီးလက်ကောက်၊ နားမှာလည်း နားကပ်နဲ့။ အသက် (၃၀)ခန့် လူငယ်တစ်ဦး။
“ဆရာ . . ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုသင့် မပြုသင့်၊ ကောင်း မကောင်း၊ တားရော့နဲ့ ကြည့်ချင်လို့ . . ”
ထုံးစံအတိုင်း ပြုဘွယ်ရာတွေပြုပြီး တားရော့ကားချပ်တွေကို ဖြန့်ခင်းလိုက်တဲ့အခါ ပထမဆုံး ပေါ်လာတာက Hierophant ဘုန်းကြီးကားချပ်။
“သိပ်ထူးဆန်းတယ် ညီလေး။ ညီလေးမေးတာက အိမ်ထောင်ရေး။ တားရော့က ပြောတာက ဘုန်းကြီး။ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာတို့က တားရော့အပေါ်မှာ သစ္စာရှိရတယ်။ ယုံကြည့်ရတယ်။ သူပြတဲ့ နိမိတ်အတိုင်း ဘာသာပြန်ပေးရတာ။ ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ မှားတာ/မှန်တာက သူ့တာဝန်။ ဒီတော့ တားရော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ပြောမယ်”
ညီလေး အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စကို လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းလို့ပဲ သဘောထားပုံရတယ်။ ညီလေးရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ဘာသာရေး ကိစ္စတွေ လွှမ်းမိုးနေတယ်။ တရားစာတွေဖတ်မယ်။ တရားခွေတွေ နာယူမယ်။ တရားထိုင်မယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရဟန်းဝတ်ပြီး တရားအားထုတ်ချင်တဲ့ စိတ်တောင် ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ကြံစည်နေတယ်။ ဟုတ်ရဲ့လား။
“ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ . . ကျွန်တော်က သင်္ဘောသားပါ။ ဒီတစ်ခေါက် သင်္ဘောတက်ပြီး ပြန်လာရင် ချစ်သူနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာအစောကပြောခဲ့သလို လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်၊ ချစ်သူ ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်တွေအရ လက်ထပ်သင့်ပြီလို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာ။ ကျွန်တော်က ဖြစ်နိုင်ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့ တရားအားထုတ်ချင်တယ်။ အခုလည်း နေ့စဉ် ဘုရားရှိခိုး၊ ပရိတ်ရွတ်ပြီးတိုင်း တရားထိုင်ပါတယ်။ နာရီဝက် တစ်နာရီပေါ့ ဆရာရယ်။ ဆရာတော်တွေရဲ့ တရားစာအုပ်တွေ တရားခွေတွေကိုလည်း အမြဲနာယူတယ်။ တရားစာအုပ်တွေကိုလည်း မိဖတွေရဲ့မည်နဲ့ ဓမ္မဒါန လှူပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့။ အခုတောင် တရားစာအုပ်ပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် အုပ်ရေ (၁၀၀) လှူဖြစ်တယ်။ ဆရာ့ကိုလည်း တစ်အုပ်ဓမ္မဒါန ပြုခဲ့ပါ့မယ်။”
ကျွန်တော်က မောင်နှမတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးပါ။ သင်္ဘောထွက်တာ လေးခေါက်ရှိပါပြီ။ မိဘတွေကိုလည်း ဒဂုံမြောက်မှာ ခြံနဲ့အိမ်နဲ့ ၀ယ်ပေးထားပြီးပြီ။ ညီ၊ ညီမတွေလည်း ပညာစုံလို့ ကြင်ယာစုံသွားကြပြီ။ ကျွန်တော်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အမေကလည်း ကျွန်တော့်ကို သင်္ဘောကနား အိမ်ထောင်ပြုပြီး သူ့မျက်စေ့အောက်မှာ နေစချင်ပြီ။ မြေးချီချင်နေပြီပေါ့ ဆရာရယ်။ ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးနဲ့ကလည်း ချစ်သူသက်တမ်း (၃)နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ သူ့အနေနဲ့ရော နှစ်ဘက်မိဘတွေကပါ အိမ်ထောင်ပြုစေချင်ပြီ။
ကျွန်တော်ကလည်း အခုမှ တရားဘာဝနာဘက်မှာ ပိုပိုပြီး စိတ်အားထက်သန်လာတယ်။ ပိုပိုပြီး အသိအမြင်တွေ နက်ရှိုင်းလာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တရားထိုင်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကို ရွံစရာကြီးအဖြစ် စက်ဆုပ်လာတယ်။ ရှေ့တိုးရခက် နောက်ဆုတ်ရခက် ဖြစ်နေတယ်ဆရာ။
“ကြားရတာ ၀မ်းနည်း၊ ၀မ်းသာ ခံစားရပါတယ်။ ငွေကြေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ နှစ်ဘက်မိဘ သဘောတူညီချက်နဲ့ ချစ်သူကို ပေါင်းဖက်ခွင့်ရတာ လောကကြောင်းအရ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ။ ပျော်စရာကြီးပေါ့။ လောကုတ္တဘက်က ကြည့်ပြန်တော့ ဗုဒ္ဓ လမ်းစဉ်တော်အရ လက္ခဏရေး (၃)ပါးကို ရှင်းလင်းပီပြင်စွာ ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ သိမြင်နေရပြီဆိုတာကလည်း သာဓုခေါ်စရာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါဘဲ။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက် လူသားတာဝန်တော့ ကျေပွန်ရမယ်။ တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ရဦးမယ်။ တနည်းဆိုရရင် ဘ၀ဟောင်းက ပါလာတဲ့ အကြွေးတွေကို ဆပ်ရဦးမယ်။ ကျေကျေနပ်နပ် ပေးဆပ်လိုက်ပါဦး။ လောကီရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ထမ်းဆောင်ရင်း တစ်ဘက်က ကိုယ်ရထားတဲ့ ပါရမီမျိုးစေ့လေးကိုလည်း ပျောက်မသွားစေဘဲ မှန်မှန် ပျိုးထောင်ထားပေးပါ။”
လောကီတာဝန်တွေ ကျေတဲ့တစ်နေ့မှာ တစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပျိုးထောင်ပြုစုလာတဲ့ ပါရမီဥာဏ်ကလည်း ရှင်သန်ကြီးထွားလာချိန်နဲ့ အကိုက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်တာဝန်တွေ ကြားကနေပြီး သေတာပန်၊ သကဒါဂမ်၊ အနာဂမ် စတဲ့ အရိယာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကိုမှ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ မစွန့်လွှတ်ပါနဲ့။ လမ်းမှန်ရင် တစ်နေ့တော့ ရွာတွေ့မှာ သေချာပါတယ်။
“ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါဆရာ . . ။ မမေးပေမယ့် ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေ ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ တားရော့ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ဝေခွဲရခက်နေတဲ့ ကျွန်တော့် အတွေးတွေကို သဘာဝကျကျ မျှမျှတတ သုံးသပ်အကြံပေးတဲ့ ဆရာ့ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။”
Posted by aha at 2:04 AM0comments
သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်း ဗေဒင် ပညာ (အပိုင်း-5)
ဤဗေဒင်ပညာသည် ကိန်းနှင့် နိမိတ်ကို ခွဲခြားဟောပြောရသော ပညာဖြစ်သောကြောင့် ကိန်းအတိုင်း ဆန်းဝင်သည့် နိမိတ်များ ပေါ်ပေါက်လျှင် အကြောင်းခံရှိ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာတော့မည်ကို ကြိုတင် သိရှိထားရမည်။
ကောင်းသောဌာနမှ ပြသောနိမိတ်သည် ဇာတာရှင်အတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမည့် နိမိတ်ဖြစ်၍ ဆိုးသောဌာနမှ ပြသောနိမိတ်သည် ဇာတာရှင်အတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမည့် နိမိတ်ပင် ဖြစ်လေသည်။
သက်ရောက်သော ဂြိုဟ်ဖြစ်စေ၊ ဒသာဂြိုစ်ဖြစ်စေ ၎င်းဂြိုဟ်သည် ကောဇာတိုင်မှ ကောင်းသော အထက်ဂြိုဟ်မှ ထူထားသော သက်ရောက်တိုင်၊ ဒသာတိုင် စသည်တို့သည် ကောင်းသောဌာနများမှသာ နိမိတ်ပြလိမ့်မည်။ (တိုင်ထိပ်၊ တန်းစီး၊ တန်းကပ်= ကောင်းသောဌာနများ)
ကောဇာတိုင်တွင် သက်ရောက်ဒသာ စသည့်ဂြိုဟ်များမှာ အောက်ဂြိုဟ်များ ဖြစ်ကြလျှင် ထူထားသောတိုင်တွင် မကောင်းသောဌာနမှသာ နိမိတ်ပြလိမ့်မည်။ (ပြ၊ တိက္ခနိစ်၊ မန္ဒနိစ်)
ကောင်းသောဌာနမှာ နောက်ကကပ်သောဂြိုဟ်သည် (အကြောင်းနိမိတ်)ဖြစ်၍ အဓိကဂြိုဟ်သည် (အကျိုးတရား) ဖြစ်လိမ့်မည်။
မကောင်းသောဌာနမှာ ဂြိုဟ်တို့ကို ၀ိပရိတ်ပြန်ပြီးသည့် အချက်သည် (အကြောင်းနိမိတ်) ဖြစ်၍ နဂိုမူလ အမြင်အတိုင်းသည် (အကျိုးတရား) ဖြစ်လိမ့်မည်။
အကြောင်းနိမိတ်ပေါ်မှသာ အကျိုးတရားအဖြစ်များသည် မုချ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပျက်ရ၏။ ဤကောင်းသောဌာနမှ ပြမည့်နိမိတ်မှာ စနေဂြိုဟ်သည် (အကြောင်းနိမိတ်) ထို့ကြောင့် စနေဂြိုဟ်ကိုကြည့်လျှင် ကြာသပတေးဂြိုဟ်က ကပ်လျှက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် (ဓမ္မာ) သက်ရှိ စနေဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ရန်တွင် အထက်ဂြိုဟ်ကပ်၍ မုဆိုးဖို။ (သောကြာဂြိုဟ် သက်ရောက်ဒသာတိုင်)
ထို့ကြောင့် ဤဇာတာတွင် ဦးစွာနိမိတ်အဖြစ် ဇာတာရှင် ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်တွင် (မွေးနံ ကြာသပတေးဂြိုဟ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တည်ရှိသော စနေဂြိုဟ်) အဝေးရပ်မှ စနေဂြိုဟ်နာမည်မှည့်ခေါ်သော လူမျိုးကွဲလူစိမ်း မုဆိုးဖို ယောက်ျားတစ်ဦး ရုတ်တရက် အကြောင်းမကြားဘဲ (တိုင်ထိပ်သဘာဝ) ၀င်ရောက်လာသော နိမိတ်ကို တွေ့လျှင် (အကြောင်းတရား) . ..
(အကျိုးတရားအဖြစ်) ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို စနေဂြိုဟ်ကပ်၍ (သက်မဲ့ ကြာသပတေးဂြိုဟ်)၊ အောက်ဂြိုဟ် စနေဂြိုဟ်ကပ်၍ အကောင်းအား ၁မတ်ဖိုးသာရှိသော ကြာသပတေးဂြိုဟ် (မီးဂြိုဟ်စနေဂြိုဟ်ကပ်၍) မီးဖိုတစ်လုံး မမျှော်လင့်ဘဲ အခမဲ့ပေး၍ ၀င်လာမည်။ (တနည်း) မီးဖိုအဟောင်းကို ငွေကြေး အမြတ်အစွန်းနှင့် ရောင်းချရမည်။ ၀ယ်သူပေါ်မည်။ အကျိုးအားဖြင့် ၁မတ်ဖိုး ကောင်း၏။ (၄ မတ်ကောင်းသော ဌာနတွင် ၃မတ်ဆိုးသော ဂြိုဟ်ကပ်သောကြောင့် ကောင်းအား ၁မတ်မျှသာ ရှိသည်။)
ကပ်ဂြိုဟ်နှင့် အပြန်အလှန် (အကြောင်းနှင့်အကျိုး) ယူဆပုံကို သဘောပေါက်ပါလေ။
ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို စနေဂြိုဟ်ကပ်သကဲ့သို့ အကြောင်းနိမိတ်ယူသောအခါ၌ စနေဂြိုဟ်ကိုလည်း ကြာသပတေးဂြိုဟ် ပြန်၍ ကပ်လေသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ အကြောင်းနိမိတ် ပြသည့်နေရာမှာ မွေးနံဂြိုဟ်ကို ဇာတာရှင်၏ နေအိမ်ဟု ယူဆ၍ ဟောလိုရာဂြိုဟ်သည် တစ်လုံးကျော်၌ ရှိလျှင် အောက်ကို ခြေရင်း၊ မျက်စောင်းထိုး တစ်အိမ်ကျော်၊ အထက်တွင်ရှိလျှင် ခေါင်းရင်း မျက်စောင်းထိုး တစ်အိမ်ကျော် စသည်ဖြင့် ဌာနကို ယူရမည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ် တန်းစီးဌာနအကြောင်း ဟောရန်အတွက် အကြောင်းနိမိတ်မှာ . . .
အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် မွေးနံ ကြာသပတေးဂြိုဟ်မှ အောက်တစ်လုံးခြားတွင် ရှိသဖြင့် ဇာတာရှင်၏ ခြေရင်းဘက် တစ်အိမ်ကျော် မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်တွင် ဇာတာရှင်ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့သိရှိရသော ထင်ရှားသည့် (အကြောင်းတရားနိမိတ်များ) ပေါ်လာလျှင် ဇာတာရှင်မှာ (တန်းစီးအင်္ဂါဂြိုဟ်ကို ကြာသပတေးဂြိုဟ် ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးတရား)များကို မုချ ကြုံတွေ့ရပေလိမ့်မည်။ အကြောင်းနိမိတ်ခံကို တွေ့ပြီးမှ အကျိုးဖြစ်ရမြဲကို သတိချပ်ရမည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို ဟောရန်အတွက် နိမိတ်မှာ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို အင်္ဂါဂြိုဟ်ကပ်လျှက်ရှိသည်။ (၅-၃) ပန်းစိန် သက်ရှိ။ (၅-၃)သည် မိတ်ပျက်ရန်။ ကပ်သော အင်္ဂါဂြိုဟ်မှာ ကောဇာတွင် ကိစ္ဆ (အောက်ဂြိုဟ်)ဖြစ်၍ တိရစ္ဆာန်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကပ်ဂြိုဟ်သည် လေဂြိုဟ်ဖြစ်၍ (စရေ)။ ၅-၃ သည် သောမနှင့် ပါပ ဖြစ်၍ တစ်ခြားသောအရပ်။ ကြာသပတေးဂြိုဟ်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ကပ်၍ အဆိပ်ရှိသော လေထဲမှာ ကျက်စားသော သတ္တ၀ါ။
ထို့ကြောင့် ဇာတာရှင်၏ ခြေရင်းဘက် တစ်အိမ်ကျော်မှ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်၊ သစ်ပင်စသည်တို့တွင် တခြားသောအရပ်မှလာသော ပျားသတ္တ၀ါ၊ ပျားအအုံဖွဲ့၍ ၀င်လာမည်။ (၀ါ) ပျားစွဲမည်။ ဤအကြောင်းနိမိတ်ကို ဇာတာရှင် တွေ့ပြီး မကြာမီ၌ အောက်ပါ ၃-၅ တန်းစီးဌာန ပရိယာယ် သဘောများ အကျိုးဆက်အဖြစ် မုချဝင်လာဖြစ်ကြုံမည်ဟု ဟောရမည်။
Ø ၃-၅ စိန်ပန်း မိတ်။ သက်မဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်။ ပါပ-သောမ ဖြစ်၍ တစ်ပါးသော အရပ်။ လူမျိုးကွဲ
Ø ကပ်ဂြိုဟ် ကြာသပတေးဂြိုဟ်သည် ကောဇာတိုင်တွင် အထက်ဂြိုဟ် (လာဘ)
Ø တန်းစီးဌာန ၃မတ်ကောင်းသော ဌာနတွင် ကပ်ဂြိုဟ်လာဘ ၂မတ်ကောင်း၍ ၅မတ်ဘိုး ကောင်းသော သက်မဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အထက်ပါ ပျားစွဲသော နိမိတ်ကို မြင်ပြီးမှ ဇာတာရှင်သည် အခြားသော မြို့ရွာမှ စက်ဘီး၊ စက် စသည် တန်းဘိုးရှိသော အင်္ဂါဂြိုဟ် သက်မဲ့ပစ္စည်း ၀င်လာမည်။ အကျိုးပြုစေမည်။ ကောင်းနိမိတ်ခံ၍ ၀င်လာလျှင် ကံကောင်းသော ၀င်ခြင်းသာ ဖြစ်၏။
မကောင်းသောဌာနတို့မှ ပြသည့် နိမိတ်များမှာ
ဥပဒေသ . . .
Ø နိစ်နှင့်ပြတို့မှ မျက်မြင်အတိုင်း ဂြိုဟ်တို့ကို အလုံးစုံ ၀ိပရိတ်ပြန်ပြီး သတ်မှတ်ရမည်။ ၎င်းဝိပရိတ် ပြန်ပြီးသားသည် နိမိတ်ဖြစ်၍ “မျက်မြင်အတိုင်း”သည် အကျိုးအဟောများ ဖြစ်တော့သည်။ (ထွက်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ နစ်နာခြင်း အဟောများကို ဟောရသည်။)
Ø မွေးနံဂြိုဟ်သည် နိစ်နှင့်ပြ ဌာနများတွင် တည်ရှိသောအခါ ဌာန (၇) ပါးလုံးရှိ ဂြိုဟ်တို့ကို အားလုံးပင် ၀ိပရိတ်ပြန်ခြင်းသည် နိမိတ်ဖြစ်၍ မျက်မြင်အတိုင်းသည် အကျိုးတရား ဖြစ်လေသည်။
အထက်ပါတိုင်ကို ကြည့်လျှင် . . .
Ø ပြဌာနတွင် ရှိ၏။ သေ၀ံ ဓါတ်ပျက်ရန်။ သက်မဲ့။ ၀ိပရိတ်ပြန်သော် မိတ်။ သက်ရှိ။
Ø ကပ်သော ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် အောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်၍ ၀ိပရိတ်ပြန်သော် အထက်ဂြိုဟ်။ အပျိုလူပျို။ ကျားဖြစ်သောကြောင့် “မ” ဟုပြန်၍ယူ (အပျို)
Ø သောမချင်းဖြစ်၍ အနီးအနား၊ အတူနေ၊ ၀ိပရိတ်ပြန်သော် အဝေး အခြားအရပ်။
Ø ကပ်ဂြိုဟ် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် (၀ံသေ)ရေဂြိုဟ်ဖြစ်၍ ၀ိပရိတ်ပြန်သော် မီးဂြိုဟ်
ထို့ကြောင့် ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ အိမ်ခေါင်းရင်းဘက်ရှိ မိန်းမပျိုတစ်ဦးသည် အဝေးအရပ်သို့ မီးရထား(မီး)ဖြင့် ထွက်သွားခြင်း (သို့မဟုတ်) ဇာတာရှင်နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း၊ ဖျားနာထိခိုက်ခြင်း (ပြသဘော) တို့ကို ကြားသိတွေ့မြင်ရသော နိမိတ်များ ပေါ်ပေါက်လျှင် . . .
ဇာတာရှင် ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ အိမ်တွင်းမှ သွပ်၊ သံ၊ သစ် စသည်ဖြစ်စေ။ သောကြာဂြိုဟ် ပရိယာယ် ရေအိမ်သာခန်း၊ နောက်ဖေး၊ အဖီခန်းများ ပျက်ခြင်း ပြိုခြင်းတို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤနေရာ၌ အလုံးစုံ မျက်မြင်မှ ၀ိပရိတ်ပြန်ခြင်းသည် အကြောင်းနိမိတ်။ နဂိုအရှိအတိုင်းသည် အကျိုးအဟောများ ဖြစ်ပါသည်။
ဆန်းကျင်မှုနှင့် ၀ိသေသ အဟောများ
မကောင်းသောဌာန၌ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို အင်္ဂါဂြိုဟ်ကပ်၍ ၎င်းအင်္ဂါဂြိုဟ်မှာ ဆန်းကျင်သော် အင်္ဂါဂြိုဟ်မစုံသူ ဖွားမြင်မည်။ (မူလ အင်္ဂါဂြိုဟ်က အထက်၊ ကောဇာ အင်္ဂါဂြိုဟ်က အောက်ဖြစ်လျှင် ဇာတာရှင် နေရာအိမ်၌ . . .။ မူလ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကအောက်၊ ကောဇာအင်္ဂါဂြိုဟ်က အထက်ဖြစ်လျှင် ဇာတာရှင်၏ အိမ်နှင့် အနီးအနား ကပ်လျှက်အိမ်တွင် . . .)
မကောင်းသောဌာန၌ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို မည်သည့်ဂြိုဟ်မဆို ကပ်၍ သက်မဲ့ဖြစ်လျှက် ဆန်းကျင်သော် အိမ်တွင်း အင်းမြှုပ်ထားခြင်းခံရခြင်း၊ အင်းတိုက် အခိုက်မိခြင်းများ ဖြစ်မည်။
ကောင်းသောဌာန၌ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို အကြီးစား ဆန်းကျင်ဂြိုဟ် ကပ်သော် အိမ်ဆောက်သော် အပြီးမသတ်ခြင်း၊ ၀ယ်လျှင် ပျက်စီးပြီးမှ ရခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်မည်။
ကောင်းသောဌာန၌ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို အင်္ဂါဂြိုဟ်ကပ်၍ ဆန်းကျင်လျှင် အမွှာပူးမွေးဖွားမည်။
ပြတွင်နေသော တနင်္လာဂြိုဟ်ကို တနင်္လာဂြိုဟ်ကပ်၍ ဆန်းကျင်သော် မိန်းမဖြစ်က ကားတိုက်ခြင်း၊ ကားမှောက်ခြင်း အကြောင်းနိမိတ်ကိုတွေ့ပြီး ငွေလိမ်ခံရခြင်း၊ ကျောက်လိမ်ခံရခြင်း၊ ကြွေးအမှုပေါ်ခြင်း ဖြစ်မည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် တနင်္လာဂြိုဟ်ကို ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်က ဆန်းကျင်၍ ကပ်သော် ဂ၀ံရုပ် ၀င်လာမည်။ အစီအရင်မကင်းသော နိမ့်ကျသည့် အရုပ်များ ၀င်လာမည်။
တနင်္လာဂြိုဟ်သည် ပြတွင်နေပြီး တနင်္လာဂြိုဟ် ဆန်းကျင်ပြီး ကပ်ပါက ယောက်ျားဖြစ်လျှင် ငွေကြေး အမှုအခင်းဖြစ်ခြင်း အကြောင်းနိမိတ်ကို တွေ့ပြီး ကားတိုက်ခံရတတ်သည်။ ခြေကျိုးရတတ်သည်။
ဇာတာရှင်၏ အိမ်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမရှိပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်က ဆန်းကျင်၍ ကပ်လျှင် (ကောင်းသောဌာန၌) အမွှာပူး ခလေးမွေးမည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို သက်ရှိအဖြစ် မည်သည့်ဂြိုဟ်မဆိုကပ်လျှက် ဆန်းကျင်ခဲ့သော် အင်္ဂါဂြိုဟ်ချို့ယွင်းသူ (သို့မဟုတ်) အောက်လမ်းပညာသည်၊ စုန်းမ၊ စုန်းပညာသည် ရှိသည်။ ၀င်ထွက် သွားလာ ဆက်ဆံမှုရှိသည်။ မကောင်း။
မကောင်းသောဌာနတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို သက်မဲ့အဖြစ် မည်သည့်ဂြိုဟ်မဆိုကပ်လျှက် ဆန်းကျင်ခဲ့သော် အစာမိခြင်း၊ ဆေးမိခြင်း၊ ဆေးထိုးမှားခြင်း၊ အဆိပ်သင့်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။
ပြဌာနတွင် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်တည်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်က ဆန်းကျင်၍ ကပ်သော် လှည်းပျက်ကို လှည်းပေါ်တင်ခြင်း၊ လှေပျက်ကို လှေပေါ်တင်ခြင်း စသော သက်မဲ့အပျက်နိမိတ်ကို တွေ့ပြီးလျှင် သူတစ်ပါး လက်ချက်ကြောင့် သေကြေပျက်စီးတတ်သည်။ (အကြီးစား ဆန်းကျင်လျှင် သေနိုင်၍ အလတ်စား ဆန်းကျင်လျှင် သေလောက်အောင် အနာတရ ဖြစ်တတ်သည်။ မူလတိုင်က ဇေယျ၊ ကောဇာတိုင်က ကိစ္ဆ အကြီးစားဆန်းကျင်လျှင် လူသတ်ခံရတတ်ခြင်း၊ မူလတိုင်က ကိစ္ဆ ကောဇာတိုင်က ဇေယျ အဖြစ် ဆန်းကျင်လျှင် မိမိရောဂါနှင့် သေကြေတတ်သည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်တည်၍ ရေဂြိုဟ်ကပ်ပြီး မျက်မြင်သက်ရှိဖြစ်ခြင်း၊ ဆန်းကျင်၍ ကပ်ခြင်း၊ လေဂြိုဟ်မီးဂြိုဟ်ကပ်၍ ၀ိပရိတ်ပြန်မှ သက်ရှိဖြစ်ခြင်း၊ ဆန်းကျင်ခြင်းများကို တွေ့သော် အိမ်ပေါ်အိမ်နားတွင် ရေနစ်သေသူ၊ ရင်ခွဲရသူ၊ ၀မ်းရောဂါဖြစ်သူ၊ ၀က်ရူးပြန်သူ ရှိမည်။ မွေးနံဂြိုဟ် ဆိုးအားရှိလျှင် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်တည်၍ တနင်္လာဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း ဆန်းကျင်ခြင်း (တန်းအောက်နိစ်များတွင် ၀ိပရိတ်ပြန်မှ သက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း) ကို တွေ့လျှင် လူခြောက်မွေးခြင်း၊ ဇာတာရှင်၏ အိမ်ပေါ်အိမ်နားတွင် တစ်ခုခု တွေ့ရမည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် ကြာသပတေးဂြိုဟ်တည်၍ စနေဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ စနေဂြိုဟ်ကို ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ ကပ်ဂြိုဟ် ဆန်းကျင်ခြင်းကို တွေ့လျှင် အိမ်နောက်ဖေး တောင်ပို့ပေါက်ခြင်း၊ မှိုပေါက်ခြင်း၊ ခိုက်ခြင်း ဖြစ်မည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် အခြားဂြိုဟ် တစ်ခုခုကပ်၍ သက်မဲ့ဖြစ်ပြီး ဆန်းကျင်သော် မြေမသန့်ခြင်း၊ မြေဘုတ်ဘီလူး ရှိခြင်းကို ဟောရမည်။
ကောင်းသောဌာနတွင် သောကြာဂြိုဟ်ကို မြေဂြိုဟ်က ကပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ရေဂြိုဟ်ကပ်လျှင် သော်လည်းကောင်း၊ သက်ရှိဖြစ်၍ ဆန်းကျင်မူ အိမ်ပေါ်အိမ်နားမှာ အနည်းငယ် ကိုယ်ရေကိုယ်သား မကောင်းသူ၊ အနည်းငယ် စိတ်နောက်သူ ရှိမည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် သောကြာဂြိုဟ်ကို မြေဂြိုဟ်ကပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ရေဂြိုဟ်ကပ်လျှင် ဆန်းကျင်လျှင် အပြင်းအထန် စိတ်နောက်သူ၊ နူနာစွဲကပ်သူ ရှိမည်။
ကောင်းသောဌာနတွင် သောကြာဂြိုဟ်ကို တနင်္လာဂြိုဟ်ကပ်၍ ဆန်းကျင်မူ မိုးကြိုးခခြင်းကို ဟောပါ။ (ကောင်း၏)
စနေဂြိုဟ်ကို ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကပ်၍ သက်ရှိဖြစ်သော် ကပ်ဂြိုဟ်ဆန်းကျင်သော် နတ်ဝင်သည်လာမည်။ နတ်စွဲ၊ နတ်နှင့် ပတ်သက်သူ ၀င်လာမည်။ နတ်ဝင် နတ်ပူးခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့ရမည်။
တန်းကပ်၊ တိုင်ခြေ တစ်ခုခုတွင် စနေဂြိုဟ်တည်ပြီး သက်ရှိဖြစ်သော် ကပ်ဂြိုဟ်ဆန်းကျင်သော် ရှောသားမွေးမည်။
တိုင်ခြေ စနေဂြိုဟ်ကို စနေဂြိုဟ်ကပ်၍ ဇာတာရှင်သည် မိန်းမဖြစ်လျှင် ဆန်းကျင်လျှင် ရှောသားမွေးမည်။
စနေဂြိုဟ်တိုင်ခြေတည်ပြီး သက်ရှိဖြစ်၍ တန်းစီး ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို ပါပဂြိုဟ်ကပ်၍ သက်ရှိဖြစ်သော် ဇာတာရှင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမဖြစ်သော် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို ကပ်သောဂြိုဟ် ဆန်းကျင်သော် အမွှာပူး မွေးမည်။
တိုင်ထိပ်တွင် ရှိသော စနေဂြိုဟ်ကို ကောဇာ (၀ရ)ဂြိုဟ်ကပ်ပြီး ဆန်းကျင်သော် ၎င်းစနေဂြိုဟ်သက်ရှိဖြစ်သော် အချင်းစလွယ်သိုင်းနှင့် ခလေးမွေးခြင်းကို ဟောရမည်။ ဇာတာရှင်၏ အိမ်ပေါ်၌ တွေ့ကြုံရမည်။
အထက်ပါအတိုင်း ကပ်သောဂြိုဟ်သည် (မရဏ) အဖြစ်နှင့် ဆန်းကျင်လျှင် ဇာတာရှင်၏ အိမ်အနီးအနားတွင် တွေ့ကြုံရမည်။
တန်းကပ် တိုင်ခြေ တစ်ခုခုတွင် တည်သော ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို စနေဂြိုဟ်ကပ်လျှင် ကပ်သော စနေဂြိုဟ်မှာလည်း အောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်လျှင် ရုံးဂတ် စသည် ရောက်တတ်၏။
တိုင်ခြေမှာရှိသော တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ကို သက်မဲ့အဖြစ်နှင့် ကပ်သောဂြိုဟ်မှာ အောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်လျှင် အိမ်ပျက်၍ ပြင်ရတတ်သည်။
စနေဂြိုဟ်တိုင်ထိပ် တန်းစီး တစ်ခုခုတွင် တည်ပြီး၊ ကောဇာဂြိုဟ်၏ ၀ရဂြိုဟ် သက်ရှိအဖြစ်ကပ်လျှင် ဇာတာရှင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမ ၀င်လာခြင်းကို ဟောရမည်။ ဇေယျဂြိုဟ် ကပ်လျှင် ဇာတာရှင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမမွေးဖွားသော အိမ်တွင် အိပ်ရပါက အကြံအစည်များ အထူးအောင်မြင်မည်ကို ဟောရမည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်တည်၍ သက်မဲ့ဖြစ်ပြီး အောက်ဂြိုဟ် ကပ်ပါက လူမအိပ်ဘဲ၊ လူမနေသော လစ်လပ်နေသော အိမ်ယာကွက်လပ် ရှိသည်။ (သက်ရှိဖြစ်ပါက အိမ်ထဲ၌ အိမ်ထောင်ပျက် ယောက်ျား၊ မိန်းမ တစ်ဦးဦး ရှိသည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် သောမဂြိုဟ် နှစ်ထပ် ကပ်ယှဉ်၍ ဖြစ်စေ၊ သောမဂြိုဟ်ချင်း ကပ်လျှက်ဖြစ်စေ၊ ကပ်ဂြိုဟ် အောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်ပါက အိမ်ပေါ်အ်ိမ်နားတွင် အကြီးဆုံးသူ နာတာရှည် မကျန်းမာခြင်းကို ဟောရမည်။
ကောင်းသောဌာနတွင် မွေးနံနှင့် အတွင်းမိတ်တည်၍ သက်ရှိဖြစ်ပြီး အထက်ဂြိုဟ် ကပ်ခဲ့သော် အိမ်ထောင်ကျရန် အကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာမည်။
တိုင်ထိပ်တွင် သောကြာဂြိုဟ်တည်၍ ကပ်ဂြိုဟ်မှာ ကြာသပတေးဂြိုဟ် အထက်ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ ဆိုပါစို့ . . . (တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ဖြစ်လျှင် တိုင်ထိပ် သောကြာဂြိုဟ်နှင့် ဦးသာမိတ်ဖြစ်ပြီး သက်ရှိဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ကျခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။) အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်လျှင် ၎င်းသောကြာဂြိုဟ်နှင့် ဆွေသား မိတ်ဂြိုဟ်ဖြစ်သောကြောင့် ချစ်သူခင်သူများနှင့် တွေ့ရမည်။ (အခြားသော နေ့သားများ ကိုလည်း တွဲဖက် ဟောဆိုပါလေ)
မကောင်းသောဌာနတွင် မွေးနံတည်၍ ကောဇာဂြိုဟ်၏ အောက်ဂြိုဟ်ကပ်လျှင် လက်ရှိအခြေအနေများကို ဖျက်စီးလိုသော စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေမည်။ မကောင်းသောဘက်သို့ စိတ်များ ယိမ်းယိုင်နေတတ်သည်။ ကိစ္ဆဂြိုဟ်ကပ်လျှင် အဆိုးဘက်သို့ အထူးယိမ်းယိုင်လှုပ်ရှားသဖြင့် အမှားများကိုသာ လုပ်ကိုင် ဆုံးဖြတ်မိတတ်သည်။ ဒုက္ဓတွေ့ရတတ်သည်။ မရဏဂြိုဟ် ကပ်လျှင် သေလိုစိတ်များ ပေါ်လာတတ်သည်။ ဗျာယဂြိုဟ်ကပ်လျှင် စိုးရိမ်သောကစိတ်များ ကြီးမားမည်။ ဒွယဂြိုဟ် ကပ်လျှင် ချီတုံချတုံ စိတ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေတတ်သည်။ အကြံအစည် နှစ်မျိုး ဖြစ်တတ်၏။
မွေးနံ ပြတွင်တည်လျှင် အနာပေါက်တတ်သည်။ ပြတွင်ရှိသော နေ့နံသားသမီးများ အနာပေါက်တတ်သည်။
မွေးနံ နိစ်တွင်ရှိလျှင် အမြင့်မှကျတတ်သည်။ အကျယ်မှ အကျဉ်းသို့ ရောက်တတ်သည်။ စိတ်ကျဉ်းကြပ်မှု ကြီးမည်။
သောကြာဂြိုဟ်ကောင်းသော ဌာနတွင်တည်ပြီး ကပ်ဂြိုဟ်နှင့်တွဲ၍ သက်ရှိဖြစ်လျှင် ခရီးသွားစရာပေါ်မည်။ သွားသော် ကောင်း၏။ ကောဇာတိုင်၏ အထက်ဂြိုဟ်ကပ်လျှင် ကောင်းသော ဣဋ္ဌ ခရီးမျိုး၊ ဘုရားဖူးခရီမျိုး၊ အပျော်ခရီးမျိုးကို ယူပါ။ အောက်ဂြိုဟ်ကပ်လျှင် အနိဋ္ဌခရီးမျိုး (နာရေး) စသည်သွားရမှု ပေါ်တတ်၏။ မကောင်းသောဌာနတွင် သောကြာဂြိုဟ်တည်ပြီး သက်ရှိဖြစ်ပါက ခရီးသွားရန် ပေါ်ပေါက်သော်လည်း ပျက်ကွက်တတ်၏။ သွားဖြစ်ပါကလည်း မကောင်းတတ်ပါ။
ကောင်းသောဌာနတွင် သောကြာဂြိုဟ်ကို ပါပဂြိုဟ်ကပ်ပြီး အောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်ပါက အတောင်ပေါက် သတ္တ၀ါဝင်မည်။
ကောင်းသောဌာနတွင် စနေဂြိုဟ်ကို သောမဂြိုဟ်ကပ်ပြီး အောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်ပါက အိမ်ပေါ်မြွေတက်ခြင်း၊ မြွေတွေ့ခြင်း။
ကောင်းသောဌာနတွင် ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို အင်္ဂါဂြိုဟ်ကပ်၍ အောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်ပါက အိမ်ပေါ်အိမ်နား၌ ပျားစွဲခြင်း၊ ဗျိုင်းနားခြင်း၊ မျောက်ဝင်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။
တနင်္လာဂြိုဟ် ပြတွင် သက်မဲ့ အဖြစ်နေပြီး အောက်ဂြိုဟ်ကပ်လျှင် ငွေအနည်းငယ်။ အထက်ဂြိုဟ် ကပ်ပါက ငွေများများအတွက် ပူပန်သောကရောက်ရခြင်း။ အလိမ်အကောက်ခံရခြင်း များကို ဟောနိုင်၏။ (အကြွေးတင်ခြင်းကိုလည်း ဟောနိုင်သည်။)
မွေးနံ နိစ်ပြခံပြီး မူလတိုင်တွင် ဇေယျ၊ ကောဇာတိုင်တွင် ကိစ္ဆ၊ အထက်နှင့်အောက် အကြီးဆုံးဆန်းကျင်၍ မကျန်းမာသူဖြစ်က ခဲယဉ်းစွာ ကုရတတ်သည်။
တိုင်ထိပ်တွင် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်တည်ပြီး ၎င်းဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ကို မူလတိုင်၏ အထက်ဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ ကောဇာတိုင်၏ ဇေယျဂြိုဟ် ကပ်ခြင်း၊ သက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းကို တွေ့ပါက နေအိမ်သို့ ဘုရားဆင်းတုတော် ကြွလာတတ်သည်။
တိုင်ထိပ်တန်းစီးတွင် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်တည်ပြီး မူလတိုင်၏ အထက်ဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ ကောဇာတိုင်၏ (၀ရ)ဂြိုဟ်ကပ်ခြင်း၊ သက်မဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို တွေ့လျှင် ရှင်သီဝလိ ၀င်လာတတ်သည်။
မကောင်းသောဌာနတွင် တည်သောဂြိုဟ်ကို ကိစ္ဆဂြိုဟ်ကပ်၍ သက်ရှိဖြစ်လျှင် မွေးနံတည်ရာမှထောက်၍ မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ မျက်စောင်းထိုး အိမ်တို့၌ လူသေမည်။
တန်းကပ်တိုင်ခြေ စနေဂြိုဟ်သက်မဲ့ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိသူဖြစ်လျှင် မျောက်ထား၍ ရသော ကိုယ်ဝန်ဟု ဟောနိုင်သည်။ (ကိုယ်ဝန်တည်ပြီးချိန်နှင့် ဒသာကာလကို ကိုက်ညီစေ)
တန်းကပ်တိုင်ခြေ စနေဂြိုဟ်သက်ရှိဖြစ်လျှက် အိမ်တွင် ကိုယ်ဝန်မရှိမူ အမှုအခင်း ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ အမှုအခင်း ဖြစ်ရာ၌ စနေဂြိုဟ်ကို မိတ်ဂြိုဟ်၊ ဓါတ်ဂြိုဟ် ကပ်လျှင် တရားမမှု၊ ရန်ဂြိုဟ်ကပ်လျှင် ရာဇ၀တ်မှု ဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်တိုင် မဖြစ်သော် သက်သေ လိုက်ရတတ်သည်။ စနေဂြိုဟ်ကို ပါပဂြိုဟ်ကပ်လျှင် ဇာတာရှင်အတွက် သားချင်းတို့အတွက်၊ သောမဂြိုဟ်ကပ်လျှင် သူစိမ်းအတွက် အမှုဖြစ်ခြင်း၊ သက်သေလိုက်ရခြင်း။
တန်းကပ်တိုင်ခြေတွင် စနေဂြိုဟ် သက်ရှိ၊ မူလတိုင်ရော ကောဇာတိုင်ပါ အောက်ဂြိုဟ်များချည်း ကပ်သော် အိမ်ပေါ်အိမ်နားတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိသူ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမည်။
မွေးနံဂြိုဟ် နိစ်နှင့် ပြဌာနတို့တွင် တည်၍ ကပ်သောဂြိုဟ်မှာ အထက်ဂြိုဟ်များ ကပ်သော် မကောင်းစားနိုင်သေးပါ။
မွေးနံဂြိုဟ်သည် နိစ်နှင့် ပြဌာနတို့တွင် တည်နေပါက (၇)ဌာနလုံးကို ၀ိပရိတ်ပြန်၍ အကြောင်းခံနိမိတ်များကို ဟောရမည်။
မွေးနံ နိစ်ပြတွင်တည်သော ကာလတွင် အနိဌဘက်သို့ ယိမ်းယိုင်သဖြင့် အကုသိုလ်မှု၊ အရက်သောက်၊ ဖဲရိုက်၊ မိန်းမလိုက် စသော သစ္စာပျက်တတ်သော စိတ်များဝင်စား၍ ကောင်းမှုဘက်တွင် အားနည်းသည်။
ပရိဝါရ အာယု အစရှိသည့် ဝေဘန်ခန်း
ပရိဝါရ = အချွေအရံ၊ မိမိနှင့်ဆိုင်သော အရာများ
အာယု = အသက်၊ ကျန်းမာရေး
နာဂရ = မြို့ပြ၊ နေရပ်
ဘုမ္မိ = သုတ်သွေး၊ သွေးသား၊ အညစ်အကြေးစွန့်ရာအရပ်
ဂဟပတိ = မိမိပိုင်ပစ္စည်း
တေဇ = ပညာ
ဌာန = မိမိနေရပ်၊ အိမ်
သီရိ = ကြက်သရေ၊ မင်္ဂလာတရား၊ အလှူဒါနပြုလုပ်ခြင်း
ကာရက (၈) ပါး အကြောင်း
ကတ္တု = အလုပ်အကိုင်ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်းသဘော (ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထပ်တလဲလဲပြုခြင်း၊ အမှုကိစ္စ)
သာမိ = . . .
= နှစ်ဦးစပ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ နှစ်ဦးပိုင် (ရှယ်ယာ၊ မိမိကိုယ်ပိုင် အိမ်ငှားလိုခြင်း၊ နောက်မယားယူလိုခြင်း)
ကမ္မ = ပြုလုပ်အပ်သောအလုပ် (အမှုသစ်၊ အလုပ်အကိုင်သစ်၊ အိမ်သစ်)
ကာရဏ = ပြီးစီးအောင် ကူညီတတ်သော သဘော
အပ္ပါဒါန = ပယ်ပြစ်စေသော၊ ထွက်ခွာစေတတ်သောသဘော (ခရီးထွက်ခြင်း)
သြကာသ = တည်ရာမှီရာသဘောဖြစ်ခြင်း (မပြီးပြတ်သေးသော အလုပ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်)
အာလပ္ပန = ၀င်စေခြင်း၊ ခေါ်လိုခြင်းသဘော (ငှားယူလိုမှု၊ ငွေချေးလိုမှု)
၁-၅ အပ္ပါဒါနကာရက။ အောင်ပမိတ်။ သက်မဲ့။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်။ ပယ်ပြစ်စေသော၊ ထွက်ခွာစေတတ်သော ဆက်ဆံရေးသဘောရှိကြောင်းကို သိရမည်။ ဤတွင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သည် တိုင်ထိပ် တန်းစီးစသည် ကောင်းသောဌာန၌ နေခြင်း။ ကပ်ဂြိုဟ်ကောင်းခြင်းမျးကို တွေ့သော်ငြားလည်း ၀င်လာစေမည်ဟု မဟောအပ်တော့ချေ။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် သက်မဲ့ အင်း၊ အိမ် စသည်တို့ ဇာတာရှင်အား အကျိုးကျေးဇူးပြုပြီး ထွက်သွားခြင်း (၀ါ) ရောင်း၍ စွံခြင်းတို့ကို တိကျစွာ ယူဆဟောပြော နိုင်ပေလိမ့်မည်။
၃-၅ ကမ္မကာရက။ စိန်ပန်း။ သက်မဲ့။ စက် စသည့် အင်္ဂါဂြိုဟ် ရွေးချယ် ဟောပြောနိုင်ပေသည်။
၃-၁ တိုင်ထိပ်ဌာန သက်ရှိ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။ အထက်ဂြိုဟ်ကပ်ပါက အင်္ဂါဂြိုဟ် စစ်ဗိုလ်၊ ဆရာဝန်၊ စစ်ဘက်မှ ပုဂ္ဂိုလ် အစရှိသည်တို့သည် ဇာတာရှင်ရှိရာ အိမ်သို့ (အ၀င်ဌာနဖြစ်၍ သုံးတန်ပေးနိစ်ကဲ့သို့) ၀င်ရောက်လာခြင်း ဟူ၍ တရားသေ မယူဆဘဲ (သြကာသကာရက) တည်ရာမှီရာ ဖြစ်ခြင်း သဘောကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကူညီမှုကို မရည်ရွယ်ဘဲ (တိုင်ထိပ်) ရရှိစေခြင်း၊ မစချီးမြှောက်ခြင်းကြောင့် ဇာတာရှင်အဖို့ ကောင်းခြင်းကို ဟောပြောရမည်။
· တိုင်ထိပ် မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်ရခြင်း၊ ရုတ်တရက်ဖြစ်ခြင်း (၀င်ခြင်း)
· ပြ မဖြစ်သင့်ဘဲ ဖြစ်ရခြင်း (ပျက်ခြင်း၊ ထွက်ခြင်း)
· တန်းစီး ရည်ရွယ်၍ဖြစ်ရခြင်း (၀င်ခြင်း)
· တန်းကပ် ကြိုးစား၍ဖြစ်ရခြင်း (၀င်ခြင်း)
· မန္ဒနိစ် မိမိကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း (ပျက်ခြင်း၊ ထွက်ခြင်း)
· တိက္ခနိစ် အဆိုးကြုံ၍ဖြစ်ရခြင်း (ထိခိုက်နစ်နာခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း)
· တိုင်ခြေ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း (ယာယီအားကြီးခြင်း)
ဆက်ရန် . .
Posted by aha at 6:19 AM0comments